Idphoto4you na-ebelata nha nke foto maka Passport online | Akụkọ akụrụngwa
Na-enweghị emefu ego, ịnwere ike iwepu foto nke paspọtụ dabere na obodo na ndepụta foto ka a na-edezi foto ahụ. I nwekwara ike iwe ihe onyonyo a n'ime foto nke ngajị maka visa ma ọ bụ usoro ndị ọzọ wee bipụta foto nwere paspọtụ n'ụlọ. Ihe a niile bụ ekele nke okike nke foto paspọtụ na ntanetị IDphoto4You.com nke na-eme ka ọrụ ọtụtụ ndị rụọ ọrụ.
Idphoto4 gi, bụ ngwa weebụ dị n'ịntanetị dị mfe nke na-enye gị ohere ịmepụta foto paspọtụ nwere oke oke na ntanetị na-enweghị ego. Ihe ị chọrọ bụ igwefoto dijitalụ, ị na-ese foto, bulite ya wee soro usoro nke ọrụ Idphoto4you iji nweta ụdị foto paspọtụ.
1 Esi nweta foto foto paspọtụ site na igwefoto dijitalụ
2 Ogo foto paspọtụ na Spain
3 Ihe osise nke DNI na paspọtụ ahụ abụrụ otu?
4 Paspọtụ chọrọ foto na Spain
5 Etu ị ga-esi gbanwee foto na paspọtụ na ntanetị (ị nwere ike ikwu maka ngwa ma ọ bụ weebụsaịtị)
Esi nweta foto foto paspọtụ site na igwefoto dijitalụ
Nke a bụ ndụmọdụ dị mfe, ị kwesịrị ịnwe ọcha na-acha ọcha ma hapụ ohere zuru oke n'akụkụ isi iji wepụta ihe oyiyi ahụ. Hụkwa na ịnweghị onyinyo na ihu gị ma ọ bụ nzụlite gị, jikwa igwefoto n'otu oge dị ka isi gị.
Akwụsịla ibudata ngwa a nke ga - enyere gị aka inwe ndepụta foto gị maka paspọtụ, na nha ogo ya maka usoro iwu a.
Ogo foto paspọtụ na Spain
Foto ndị dị na paspọtụ na Spain ga-agbaso usoro chọrọ, nke anyị ga-ekwu maka n'okpuru. Ọ bụ ezie otu n'ime ihe ndị kasị mkpa bụ size nke kwuru foto. Dị ka ị nwere ike ịmaraworị, mgbe anyị na-aga ebe ịse foto, ọ bụrụ igwe ma ọ bụ onye na-ese foto, a ga-akọwa ya n'oge niile na foto ndị a bụ maka paspọtụ. Ebe ọ bụ na ha nwere otu nha.
N'ihe banyere Spain, dị ka gọọmentị n'onwe ya gosipụtara, nha foto ndị a ga-adị n'etiti 35 na 40mm n'obosara na nke kwekọrọ na ya, ya bụ, n’agbata 40 na 53 mm elu. Anabataghị ya n'oge ọ bụla na foto ndị ahụ pere mpe karịa nke a. Na mgbakwunye, n'ime ha, isi na akụkụ dị elu nke ahụ kwesịrị ịnọ n'etiti 70 na 80% nke foto ahụ.
Ihe osise nke DNI na paspọtụ ahụ abụrụ otu?
N'ọtụtụ ọnọdụ, enwere ndị ha ejirila otu foto ahụ mee ihe n’akwụkwọ abụọ ahụ. Eleghị anya ị nwere otu foto ahụ na NJ gị na paspọtụ gị, yabụ na ọ ga-ekwe omume. Nke bụ eziokwu bụ na ọ dabere na nke ọ bụla, ebe ọ bụ na mgbe ị na-emegharị DNI, a na-arịọ foto ọhụrụ mgbe niile, nke dị iche na nke gara aga. Ọ bụrụ na imegharịrị DNI na mgbe ị ga-emegharị paspọtụ ahụ, ọ ga-abụ na ha ga-enye gị ohere iji foto nke DNI. Ma, ọ bụghị ihe na-eme mgbe niile.
N'ihe banyere foto NJ, a na-egosipụtakarị na nha ahụ ga-enwe 32 by 26 millimeters. Nke a bụ ihe gosipụtara na webụsaịtị gọọmentị nke Mịnịstrị. Ọ bụ ya mere ha ji adịkarị ntakịrị karịa ndị paspọtụ. Mana enwere oge mgbe iji foto anyị jiri maka DNI ha na-enye anyị ohere imegharị paspọtụ ahụ.
Paspọtụ chọrọ foto na Spain
Dị ka anyị kwurula na mbụ, foto paspọtụ na-enwekarị ụfọdụ ihe achọrọ na Spain. Ọ bụrụ na emezughi ihe ndị a, foto ahụ agaghị aba uru ma ọ gaghị anabata ya. Ndị a bụ akụkụ ndị bụ isi, mana ọ dị mkpa irube isi n'ọnọdụ ọ bụla, iji zere nsogbu na foto a kwuru. Kedu ihe ị ga-emezu?
Na-adịbeghị anya Photo: Ike ịbụ karịa 6 ọnwa
Isi na akụkụ ahụ dị elu nke ahụ kwesịrị ịnwe n'etiti 70 na 80% nke foto ahụ
Ndabere ga-acha ọcha na edo
Foto a gha adi na agba ma hie etiti
Ga-e biri ebi na foto mma akwụkwọ
Onye ahu aghapuru ile igwefoto ozugbo
Anya ga-emeghe ma ọ bụrụ na a na-eji iko eme ya, a ga-eji enyo doro anya mee ya
Anabataghị foto nwere okpu, okpu, ịchafụ ma ọ bụ visor
N'ihe banyere iyi mkpuchi, ị ga-enwerịrị ike ịhụ ihu gị nke ọma n'ọnọdụ ọ bụla
Maka foto ụmụaka nke a ga-ejide n’isi, enweghị aka a ga - ahụ na - ejide isi ya
Etu ị ga-esi gbanwee foto na paspọtụ na ntanetị (ị nwere ike ikwu maka ngwa ma ọ bụ weebụsaịtị)
Ọ bụrụ na i nweela foto, ma ọ bụghị n'ụdị achọrọ, anyị nwere ike ịkụ nzọ na ịtụgharị ya. Ya mere na anyị nwere foto nke kwekọrọ na ihe ha jụrụ anyị na paspọtụ. Maka nke a, anyị nwere ike iji ibe weebụ ma ọ bụ ngwa, nke na-enyere anyị aka ịgbanwe nha. Enwere ọtụtụ nhọrọ, dịka iji ngwaọrụ dị ka Agba nwere ike inyere aka, ọ bụrụ na anyị amatala ihe eji eme ihe na foto ahụ.
Otu n'ime nhọrọ zuru oke bụ Visafoto, na ị nwere ike ịga na njikọ a. Na weebụsaịtị a enwere ike ịmepụta foto maka akwụkwọ ikike ngafe, NJ ma ọ bụ visa nke ọtụtụ mba. Yabụ na ọ na-agbanwe n'ụzọ dị mfe n'ihe niile anyị na-achọ n'echiche ahụ. Naanị anyị ga-ebugo foto, nke nwere ike inwe ndabere. Ekele maka weebụsaịtị a anyị nwere ike ịgbanwe foto n'ime foto paspọtụ zuru oke.
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ ngwa maka gam akporo, enwere kwa nhọrọ di. Anyị nwere ngwa akpọrọ Passport ID Photo Editor, nke ị nwere ike iji mepụta foto maka ID ma ọ bụ paspọtụ gị. Ngwa ahụ dị mfe iji, naanị ị bulite foto ma dezie ya. Nwere ike ibudata ya n'efu na gam akporo n'okpuru:
Paspọtụ na onye nlezianya foto ID visa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Idphoto4you na-ebelata nha foto maka Passport ọnlaịnụ
Natán Saavedra kwuru dijo
Daalụ maka isiokwu. Achọrọ m ebe m ga-ese foto na dọkụmentị n'oge mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Maka ndụmọdụ ya, o jiri Visa foto. Site ugbu a gaa n'ihu, m ga - ewere foto ndị a naanị na ntanetị, ọ dị mma!
Zaghachi Natán Saavedra
Joan Monrabá (Colt) na-ekwu maka njikọta azụmaahịa nke ọdịnihu na Ijikọ Media
Google kpughere ihe omuma niile banyere Stadia